Janajaweed Milishaa Abarraa Buunnoo Kan ummata Gujii dararaa jiru:) Kichuu
HomeNewsAfricaJanajaweed Milishaa Abarraa Buunnoo Kan ummata Gujii dararaa jiru:)
Janajaweed Milishaa Abarraa Buunnoo Kan ummata Gujii dararaa jiru:)
Durumaa Abiyyi Ahmed EPRDF keessa taa’ee miseensa G-7 ture jedhe Andaargaachoo Tsiggee. Ammas EZEMA +EPRDF = EPP https://t.co/6XBuFESz3k pic.twitter.com/ye2v6UXJxd
— Kichuu (@kichuu24) September 21, 2019
2019/09/pizap-1-11-533×400.jpg” alt=”” width=”533″ height=”400″ />
Nama akkanatti ummata keenya fixaa jiru kana beekuu fi gocha isaa galmeessuun barbaachisaa dha. Yeroon seeratti dhiyaatee adabamu fagoo miti! https://t.co/EW8jzbrtZS pic.twitter.com/nNwRkEXYyW
— Kichuu (@kichuu24) September 20, 2019
Nageessaa udduu duube maal jechuu barbaade
ABIN Fii ABIY garaagarummaan isaanii N fi Y qofaadha. Warri jettan deebii sirrii deebistan
Akkatti konsartii “Biifolee dhiichisaa jirruttu jiraa. Warri dhufa jirtaniis asumaa fiiga.